Qingdao Renergy Equipment Co., Ltd., ibekwe e Qingdao, China, i ishishini Hi-zobugcisa ukwenza uphando, ukwenziwa, ukuthengiswa kunye Consulting zobugcisa inkqubo entsha isizukulwana umbane amandla amancinci naphakathi kunye nenkqubo nokulondolozwa kwamandla. Nge R strong & amandla D, inkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho, Renergy iyakwazi ukunikezela inkonzo ebanzi inkxaso technology entsha energy kubathengi.
iimveliso eziphambili: inkqubo amancinci naphakathi umoya ephendulwa phantsi 100kw; solar kwisixokelelwano kunye nenkqubo gridi off, uphahla utyalo wezijikelezi kunye nokwakhiwa; umoya ukukhanya isitalato solar, ukukhanya elanga ukuze igadi, LED khula ukukhanya, LED ukukhanya eliphezulu bay, LED ukukhanya etoneleni, LED ukukhanya esitratweni, ishishini amandla ezonga lolungiso namandla nokulondolozwa kwezinto.
Renergy uye ubuchwepheshe ezingundoqo kushishino olutsha eneji. technology pitch eliguqukayo for amancinci naphakathi injini ubungakanani umoya nga ukusombulula ingxaki wokhuseleko msebenzi kwephiko lomoya. pitch eliguqukayo, inkqubo ukhuseleko ABS, inkqubo yolawulo ekrelekrele, yaye platform esweni kude ukunika ukhuselo nokhuseleko yesikhululo samandla omoya ukubaleka.
RENERGY mveliso unalo iqonga eziphambili kunye self-liphuhlise generator test, inkqubo balance plane umoya, variable iqonga test pitch, ukudinwa amandla zokuvavanya elebhu kunye nezinye turbine ezahlukeneyo umoya ngensimbi ezizodwa; mveliso inamandla 100sets unikezelo injini yomoya ngenyanga nganye.
inkqubo Wind ephendulwa iquka injini yomoya, inqaba, phezu isilawuli igridi kunye inverter, wesigaba esinye okanye kwesigaba sesithathu uqhagamshelwano lombane. Renergy umoya ephendulwa okwazi ezingavumelaniyo kwi inverters kwigridi evela ABB, EL amandla kunye neminye brand edumileyo e China kunye nakwamanye amazwe.
RENERGY-injini zomoya athandwa kakhulu eJamani, Denmark kunye namanye amazwe aseYurophu; ukusebenza iye ukuvunywa yi-arhente bethu kunye nabathengi. inkqubo Wind ephendulwa iye onamava kakhulu isantya umoya phezu 45m / s eDenmark.
inkqubo Wind Turbine efanelekileyo iifama, emakhaya, amaziko amashishini amancinane, isikhululo Telecom.
Sibamkela abathengi kunye nabahlobo ezivela kulo lonke ihlabathi ukutyelela kwaye thethana ishishini. Masisebenze kunye ukuze sizuze efanayo.